Zuva: Ndira 8, 2020
1. Mwedzi wapera thenda yeKonya Rail System Metro Line uye Metro Vehicle yakapihwa kambani yeChinese CRRC yemamiriyoni 1.2 Euro (mabhirioni 7 900 miriyoni TL). Gore rakapera muIstanbul 272 [More ...]
Provincial General Assembly mumusangano wechipiri wa2020 Gavhuna Salih Ayhan uye Sivas Meya Hilmi Bilgin vakapinda. Ayhan naBilgin vakaunza nyaya dzakawanda muSivas [More ...]
SAKBIS Yakabhadharwa 8 zviuru zveNguva muMwedzi makumi masere
Vagari vemo vanoratidza kufarira zvikuru SAKBİS Smart Bhasiketi Bhasiketi inoitwa neSakarya Metropolitan Municipality. Vagumi vanosvika mazana masere emakumi maviri vanyorera kuSAKBİS, vakagadzwa munzvimbo dzakasiyana dzeguta uye vachishandira kunzvimbo gumi nemashanu [More ...]
Zvekufambisa Coordination Musangano Wakaitirwa muKayseri
Meya weKayseri Metropolitan Municipality Memduh Büyükkılıç, senge munzvimbo dzese dzekutakura vanhu kuti vape basa remhando yepamusoro, vakati vari kuyedza. Meya Büyükkılıç akataura izvozvo [More ...]
IMM Inochengetedza Izvo Zvakatipoteredza nekudzoreredza Ngarava dzeWhite kune Hupfumi
Istanbul Metropolitan Municipality inounganidza tsvina yechikepe chinopfuura nemuBosphorus nenzira yakadzora uye inovadzosa muhupfumi. Parizvino, miriyoni imwe yemamiriyoni ekukwirisa marara anowanikwa oiri akagadzirwazve neprojekiti yezvakatipoteredza. Vose Istanbul uye [More ...]
Transport uye Infrastructure Minister Cahit Turhan, dzendege mhiri Turkey rapera, akati zvakananga dzaifanoiswa vanhu vane mamiriyoni 209 92 zviuru 548 vanhu mabasa anopiwa. Minister Turhan, State Airports Authority (DHMİ) [More ...]